Grenoble Alpes University - Study in France. EducationBro
Grenoble Alpes University Yokuxhumana
Wasekelwa : 1339
abafundi (ngu.) : 45000
Ungakhohlwa xoxa Grenoble Alpes University
Bhalisa at Grenoble Alpes University
I Université Grenoble Alpes (KUSUKELA) a olunzulu umnikelo eyunivesithi ukuqeqeshwa eliphezulu kuzo zonke eyala academic kuwo wonke amazinga : undergraduate, master, zobudokotela, kanye nesitifiketi kanye Ukuhwebelana umfundi.
I UGA itholakala e Grenoble, umuzi international kanye indawo enhle yokuhlala, umsebenzi, futhi isifundo. Njengoba izungezwe i-Alps, Grenoble uphila simo esingokwemvelo ongenakuqhathaniswa, amathuba abathandi ezemidlalo kanye nemvelo abathanda ngokufanayo. Grenoble futhi ehlanganyela impilo enhle eFrance, enikeza ezihlukahlukene imicimbi yamasiko, a nightlife ephapheme, kanye namakhulu zokudlela kulabo abafisa lokuphuza eFrance cuisine edumile emhlabeni. abafundi French futhi international bethathekile futhi uyazi: abafundi ngeke abe nenkinga ekutholeni izinhlangano kanye nemisebenzi ezibalulekile kubo.
A enyuvesi zomphakathi, the UGA Luhlanganisa amagugu France engayitholanga imfundo ephakeme.
Inyuvesi yasungulwa ngo 1339 ngu Dauphin Humbert II Viennois kanye uPapa Benedict XII ukufundisa komthetho we-civil kanye uhlu lwezincwadi zeBhayibheli, imithi, kanye nobuciko nesandla esivulekile. Nokho, lesikhungo siswele imithombo futhi dissipated ngemva kokufa Humbert II. Kwakuthinta ayesebuyele 1542 ngu Francis de Bourbon, Bala of St. Pol futhi onobunye University of Valence e 1565. Abahlali Grenoble wangaphumelela Uzame kabusha inyuvesi izikhathi eziningana nekhulu le-16 nele-17.
Napoleon Mina kabusha amandla umthetho, izinhlamvu, nesayensi e 1805-1808. Phakathi yokuvuselela Bourbon, Faculty of Izincwadi ukuthi ukuyiveza e 1815 (udla e 1847) futhi Faculty of Law e 1818 (udla 1824). The School of Pharmacy Medicine yasungulwa ngo 1866 futhi baba khono wesine e 1894. Nokho, ngesikhathi esikoleni kwadingeka nje abafundi abambalwa futhi anikezwe kuphela degrees idlanzana. Ukuthuthukiswa sciences eyunivesithi waba oholwa ekuguquleni Grenoble kusukela qekelele edolobheni entabeni ukuba umphakeli enkulu izinjini zezimboni kanye nemishini kagesi 1880s. Ikhono abangu ngokusemthethweni emisa njengoba University of Grenoble e 1879 e eyayisanda kwakhiwa Indawo de Verdun. Inani labafundi lakhula kusuka 340 e 1868 ukuze 3000 e 1930. Umqondo we uhlamvu yesayensi yomphakathi, kwamasiko nezobuchwepheshe (EPCSP) savela ngaphansi sikaNgqongqoshe weMfundo Edgar Faure. Ngenxa yalokho, eyunivesithi wahlukaniswa waba ingxenye eziningana izinhlangano ezizimele e 1970.
Uyafuna xoxa Grenoble Alpes University ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Grenoble Alpes University kumephu
Izithombe: Grenoble Alpes University Facebook ezisemthethweni
Izibuyekezo Grenoble Alpes University
Joyina ukuxoxa of Grenoble Alpes University.